DIY Micromitter Stereo FM Transmitter - CZH / Fmuser Fm Transmitter တရုတ်ပေးသွင်းသူဆက်သွယ်ရန်: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
နေအိမ် » DIY Micromitter Stereo FM Transmitter
နောက်ဆုံးတော့! - allign လုပ်ရန်ရေငုပ်နေသောစတီရီယို FM ထုတ်လွှင့်စက်တစ်ခု။
ဤစတီရီယို FM Micromitter အသစ်သည်မီတာ ၂၀ ခန့်အကွာအဝေးတွင်အရည်အသွေးကောင်းအချက်ပြထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်သည်။ တေးဂီတကိုစီဒီဖွင့်စက်သို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်မှထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်၎င်းသည်အခြားနေရာတစ်ခုတွင်ကောက်ယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင် CD player တစ်ခုမပါရှိလျှင်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်သော CD player မှသင်၏ကားရေဒီယိုသို့အချက်ပြထုတ်လွှင့်ရန် Micromitter ကိုသုံးနိုင်သည်။ နောက်တစ်နည်းအနေဖြင့်သင်သည် Micromitter ကိုသင်၏ lounge အခန်း CD player မှအိမ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရေကန်အနားတွင်ရှိသော FM ရေဒီယိုသို့အချက်ပြထုတ်လွှင့်ရန်လိုပေမည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ IC တစ်ခုတည်းကိုပဲအခြေခံထားတာဖြစ်လို့ဒီယူနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရေခဲမုန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပလတ်စတစ်အသုံးအဆောင်လေးတစ်ခုထဲမှာအလွယ်တကူတပ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ၎င်းသည် FM band (ဆိုလိုသည်မှာ 88-108MHz) မှထုတ်လွှင့်သောကြောင့်၎င်း၏ signal ကိုမည်သည့် standard FM tuner သို့မဟုတ် portable radio တွင်မဆိုလက်ခံနိုင်သည်။
သို့သော် SILICON CHIP တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သောယခင် FM transmitter များနှင့်မတူဘဲဤဒီဇိုင်းသစ်သည် FM ထုတ်လွှင့်မှု band တွင်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေခြင်းမရှိပါ။ အဲဒီအစား, 4-way DIP switch ကိုကြိုတင်ကြိမ်နှုန်း 14 ထဲကတစ်ခုရွေးရန်အသုံးပြုသည်။ ဤရွေ့ကား 87.7MHz ခြေလှမ်းများအတွက် 88.9-106.7MHz နှင့် 107.9-0.2MHz ထံမှဖုံးလွှမ်းနှစ်ခုအကွာအဝေးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုံ (၁) - Rohm BH1F စတီရီယို FM ထုတ်လွှင့်စက်၏ဇယားကွက်။ စာသားကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် FM stereo transmitter ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် SILICON CHIP တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်ပုံစံအသစ်ဖြင့်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ Minimitter ဟုအမည်ပေးထားသည်။ ထိုအစောပိုင်းဗားရှင်းများသည်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုတော့သောလူကြိုက်များသည့် Rohm BA1988 IC ကိုအခြေခံထားသည်။
ဤအစောပိုင်းယူနစ်နှစ်ခုလုံးတွင်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် coil နှစ်ခု (oscillator coil နှင့် filter coil) အတွင်းရှိ ferrite tuning slugs ကိုဂရုတစိုက်ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည်၊ သို့ဖြစ်သော RF output သည် FM receiver တွင်ရွေးချယ်ထားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ညှိနှိုင်းမှုအတော်လေးအထိခိုက်မခံသောကွောငျ့သို့သော်အချို့ဆောက်လုပ်သူများဒီအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒီဂျစ်တယ် (ဆိုလိုသည်မှာဖန်တီးထားသော) FM ရေဒီယိုရှိခဲ့လျှင်၊ သင်သည်လက်ခံသူကိုအကြိမ်ရေတစ်ခုသို့သတ်မှတ်ပြီး၎င်းမှထုတ်လွှင့်သည့်အကြိမ်ရေကို“ မှတဆင့်” အသေအချာညှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် oscillator နှင့် filter coil ချိန်ညှိမှုများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအချို့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်လူအချို့ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
အကြိမ်ရေညှိခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိသောကြောင့်ဤပြdesignနာသည်ဤဒီဇိုင်းသစ်တွင်မတည်ရှိပါ။ အဲဒီအစား၊ သင်လုပ်ရမှာက 4-DIP ခလုတ်သုံးပြီး transmitter frequency ကိုသတ်မှတ်ပြီး FM tuner ရှိ programed frequency ကို dial-up လုပ်ပါ။
ပြီးနောက်၊ transmitter ကိုတပ်ဆင်စဉ်မှန်ကန်သော RF စစ်ဆင်ရေးအတွက် coil တစ်ခုတည်းကိုချိန်ညှိရုံသာဖြစ်သည်။
FM Stereo Micromitter အသစ်သည်ယခုအခါကြည်လင်သောသော့ခတ်ထားပြီးယူနစ်သည်အကြိမ်ရေအကြိမ်ရေများများမရွေ့သွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်ပုံပျက်ခြင်း၊ စတီရီယိုခွဲခြင်း၊ အချက်ပြခြင်းနှင့်ဆူညံသံအချိုးနှင့်စတီရီယိုသော့ခတ်ခြင်းတို့သည်ယခင်ယူထားသောဒီဇိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာတိုးတက်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် panel တွင်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။
BH1417F transmitter ကို IC
ပုံ ၂ - output level ကြံစည်မှုနှိုင်းယှဉ်သောဤကြိမ်နှုန်းသည်ပေါင်းစပ်အဆင့်ကိုပြသည် (pin-2) ။ 5kHz န်းကျင်တွင် 50ms ကြိုတင်ထိုးထားခြင်းကတုန့်ပြန်မှုမြင့်တက်စေပြီး 3kHz နိမ့်ကျသော pass pass off off သည် 15kHz အထက်တုန့်ပြန်မှုကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒီဇိုင်းသစ်၏အချက်အချာမှာ Rhom Corporation မှပြုလုပ်သော BH1417F FM စတီရီယို transmitter IC ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းယခင်ဒီဇိုင်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့သော BA1404 ကိုရှာရန်ယခုခက်ခဲသွားပြီဖြစ်သည်။
Fig.1 သည် BH1417F ၏အတွင်းပိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုပြသသည်။ ၎င်းတွင် stereo FM ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲတိုင်းတာမှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းအတိအကျသောသော့ခတ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသော crystal control section တို့ပါ ၀ င်သည်။
ပြထားတဲ့အတိုင်း BH1417F မှာဘယ်ဘက်နဲ့ညာချန်နယ်များအတွက်သီးခြားအသံထုတ်ယူမှုအပိုင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်တယ်။ လက်ဝဲချန်နယ်အသံအချက်ပြသည်ချစ်ပ်၏ pin 22 တွင်အသုံးပြုသည်။ ညာဘက်ရုပ်သံ signal ကို pin 1 သို့သက်ရောက်သည်။ ထိုအသံအချက်ပြမှုများသည် ၅၀ мсအဆက်မပြတ်အထက်ရှိသောကြိမ်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသော pre-အလေးပေးသော circuit သို့လျှောက်ထားသည်။ ကြိုတင်ထုတ်လွှင့်ဖို့ 50kHz အထက်သူတို့အားကြိမ်နှုန်း) ။
အခြေခံအားဖြင့် Pre-အလေးပေးမှုကိုလက်ခံရရှိထားသော FM signal ၏ signal-to-noise ratio ကိုတိုးတက်ဖို့အသုံးပြုသည်။ demodulation ပြီးနောက်တိုးမြှင့် treble ကြိမ်နှုန်းကို attenuate အတွက်ကြိမ်နှုန်းကိုတုန့်ပြန်ပုံမှန်ပြန်ထားနိုင်အောင်, receiver အတွက်ဖြည့်စွက် de- အလေးပေးဆားကစ်ကိုအသုံးပြု။ အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်အချက်ပြမှုတွင်ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရမည့်အတိုးအလျော့များကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
Pre-အလေးချိန်ပမာဏကို pin2& 21 နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော capacitor များ၏တန်ဖိုး (သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အဆက်မပြတ်၏တန်ဖိုး = 22.7kΩသည် capacitance တန်ဖိုး x) ကိုသတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည် FM ၏စံဖြစ်သော2.2μsသို့ကြိုတင်အလေးပေးရန် 50nF capacitors ကိုအသုံးပြုသည်။
အချက်ပြကန့်သတ်ချက်ကိုလည်းကြိုတင်အလေးထားသည့်ကဏ္withinတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါအဆင့်များကိုအလွန်အကျွံမတင်ရန်တားဆီးရန်သတ်မှတ်ထားသောတံခါးခုံအထက်တွင်အချက်ပြမီးများလျော့ချခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ဒါက Over-modulation ကိုကာကွယ်တားဆီးနှင့်ပုံပျက်လျော့နည်းစေသည်။
ထို့နောက်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်လိုင်းများအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချက်ပြမှုများကို low-pass filter (LPF) အဆင့်နှစ်ခုမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပြီး 15kHz အထက်တုန့်ပြန်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤအဖွင့်အပိတ်သည် FM signal ၏ bandwidth ကိုကန့်သတ်ရန်လိုအပ်ပြီးစီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့် FM transmitter များအသုံးပြုသောတူညီသောကြိမ်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
Fig.3: ပေါင်းစပ်စတီရီယို FM ရေ signal ကို၏ကြိမ်နှုန်းရောင်စဉ်။ 19kHz နှုန်းဖြင့်လေယာဉ်မှူး၏အသံကိုသတိပြုပါ။
လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ LPF များမှရလဒ်များသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့် multiplexing block (MPX) block တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် 38kHz carrier သို့ပြောင်းလဲသွားသော sum (left + right) နှင့်ခြားနားသော (left - right) အချက်ပြများကိုထိရောက်စွာထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်သယ်ဆောင်သူအားနှစ်ဖက်စလုံးမှဖိနှိပ်ထားသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအားအချက်ပြရန်ဖိအားပေးသည် (သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားသည်) ။ ထို့နောက် pin 19 တွင်စုပေါင်း signal ကို output (full stereo encoding ဖြင့်) ပေးရန် summing (+) ပိတ်ထားသော 5kHz pilot tone နှင့်ရောနှောသည်။
19kHz pilot tone ၏အဆင့်နှင့် level ကို capacitor ကို pin 19 မှာသုံးပြီးသတ်မှတ်သည်။
Fig.3 ပေါင်းစပ်စတီရီယို signal ကို၏ရောင်စဉ်ပြသထားတယ်။ အဆိုပါ (L + R) signal ကို 0-15kHz ထံမှကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးယူထားသော။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် double sideband ဖိနှိပ်ထားသော carrier signal (LR) တွင်အနိမ့် sideband သည် 23-38kHz နှင့်အထက် sideband သည် 38-53kHz မှတိုးသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 38kHz carrier မရှိပါ။
သို့သော် 19kHz pilot tone သည် FM receiver တွင် 38kHz subcarrier ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းမှာ stereo signal ကို decodod လုပ်နိုင်သည်။
38kHz multiplexing signal နှင့် 19kHz pilot tone ကို pins 7.6 & 13 မှာရှိတဲ့ 14MHz crystal oscillator ကိုခွဲဝေခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ကြိမ်နှုန်းကို ၁.၉MHz ရရှိရန်လေးခုခွဲပြီး ၃၈kHz ရရှိရန် ၅၀ ဖြင့်ခွဲသည်။ ထို့နောက်၎င်းကို 1.9kHz pilot tone ရရှိရန်နှစ်ခုဖြင့်ခွဲထားသည်။
ထို့အပြင် ၁.၉ MHz signal ကို ၁၉ ခု ခွဲ၍ 1.9kHz signal ကိုပေးသည်။ ဒီ signal ကိုထို့နောက်ပရိုဂရမ်ကောင်တာ output ကိုစောင့်ကြည့်သော phase detector မှလျှောက်ထားသည်။ ဤပရိုဂရမ်ကောင်တာသည်အမှန်တကယ် RF အချက်ပြမှု၏ကွဲပြားသောတန်ဖိုးကိုထုတ်ပေးသောပရိုဂရမ်မာခွဲဝေပေးသူဖြစ်သည်။
ဒီကောင်တာ၏ division ratio ကို inputs D0-D3 (pins 15-18) မှာ voltage voltage များသတ်မှတ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ D0-D3 အားလုံးနိမ့်ကျသောအခါပရိုဂရမ်မာကောင်တာသည် ၈၇၇ ဖြင့်ကွဲပြားသည်။ အကယ်၍ RF လှို ၈၇.၇ MHz တွင်လည်ပတ်လျှင်တန်ပြန်မှထုတ်ထားသော output သည် ၁၀၀kHz နှင့် ၄.၆ MHz မှခွဲထားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်တူညီသည်။ crystal လှို (ဆိုလိုသည်မှာ 877MHz 87.7 ဖြင့် 100 ခွဲဝေခွဲခြား) ။
Fig.4: Stereo FM Micromitter ၏ပြည့်ဝသော circuit ။ DIP ခလုတ်များ S1-S4 သည် RF oscillator frequency ကိုသတ်မှတ်ပြီး၎င်းကို IC7 ၏ pin 1 ရှိ PLL output မှထိန်းချုပ်သည်။ ဤ output သည် Q1 ကိုမောင်းနှင်ပေးသောကြောင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့် VC1 သို့ control voltage ကိုယင်း၏ capacitance အားပြောင်းလဲစေရန်အသုံးပြုသည်။ pin5ရှိပေါင်းစပ်အသံ output ကိုကြိမ်နှုန်းမော်ဂျူလ်ပေးသည်။
လက်တွေ့တွင် pin7ရှိ phase detector output သည် varicap diode သို့သက်ရောက်သော voltage ကိုထိန်းချုပ်ရန် error signal ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီ varicap diode (VC1) ကိုအဓိက circuit ပုံ (Fig.4) တွင်ပြပြီး RF9၏ RF oscillator ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လှိုင်းနှုန်းကို inductance ၏တန်ဖိုးနှင့်စုစုပေါင်းအပြိုင် capacitance တို့ကဆုံးဖြတ်သည်။
varicap diode သည်၎င်း capacitance ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အား RF လှိုကြိမ်နှုန်းကို၎င်း၏တန်ဖိုးကို ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လည်ပတ်နေစဉ် varicap diode ၏ capacitance သည် PLL phase detector ၏ output မှရရှိသော DC voltage နှင့်အချိုးအစားကွဲပြားသည်။
လက်တွေ့တွင် phase detector သည် varicap voltage ကိုချိန်ညှိပြီးခွဲထားသော RF oscillator frequency သည် program ကောင်တာ output တွင် 100kHz ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ RF ကြိမ်နှုန်းမြင့်လွင့်သွားပါက programmable divider မှထွက်ရှိလာသည့်ကြိမ်နှုန်းသည်မြင့်တက်လာပြီး phase detector သည်၎င်းနှင့် crystal division မှထောက်ပံ့ပေးသော 100kHz အကြားအမှားတစ်ခုကို "တွေ့မြင်" လိမ့်မည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် phase detector သည် varicap diode တွင်အသုံးပြုသော DC voltage ကိုလျော့နည်းစေကာ၎င်း၏ capacitance ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤရွေ့ကား, အလှည့်ပြန် "သော့ခတ်" သို့ရောက်စေဖို့လှိုကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းစေသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် အကယ်၍ RF frequency နိမ့်ကျနေပါက programmable divider output သည် 100kHz ထက်နိမ့်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ phase detector သည်အသုံးပြုသော DC voltage အား capacitance ကိုလျော့ချရန်နှင့် RF frequency ကိုမြှင့်ရန် varicap သို့တိုးမြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ဤ PLL ၏တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်သည်ပရိုဂရမ်မာခွဲဝေစက်၏ထုတ်လုပ်မှုသည် 100kHz တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး RF လှို့၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။
Programmable divider ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် RF frequency ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် divider ကို 1079 သို့သတ်မှတ်ပါက RF oscillator သည် ၁၀၇.၉MHz အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်ရမည်၊ ၎င်းသည် programk divider output ကို 107.9kHz တွင်ဆက်လက်တည်ရှိရမည်။
ဟုတ်တယ်၊ အသံအချက်အလက်ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ဆိုရင် RF လှို့လှိုင်းနှုန်းကိုကြိမ်နှုန်းပြောင်းဖို့လိုတယ်။ pin5မှာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ signal output ကိုအသုံးပြုပြီး varicap diode ကိုအသုံးပြုတဲ့ voltage ကို modulating လုပ်တယ်။
သို့သော်သတိပြုစေလိုသည်မှာ RF လှို (ဆိုလိုသည်မှာ carrier frequency) ၏ပျမ်းမျှကြိမ်နှုန်းသည်ပရိုဂရမ်မာခွဲဝေ (သို့မဟုတ် program ကောင်တာ) မှသတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ကိုသတိပြုပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ထုတ်လွှင့်သော FM အချက်ပြမှုသည်ပေါင်းစပ်အချက်ပြအဆင့်နှင့်အညီ carrier frequency ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် frequency modulated ဖြစ်သည်။
Bandpass Filter Option ကို
IC11 ၏ pin 1 RF output တွင်အခြား bandpass filter တစ်ခုကိုလက်ခံနိုင်အောင် PC board ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤစစ်ထုတ်မှုကို Soshin Electronics Co. , မှထုတ်လုပ်ပြီး GFWB3 ဟုအမည်တပ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သော 3-terminal ပုံနှိပ်ထားသော bandpass filter တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၇၆-၁၀၈ MHz အကြိမ်ရေမျက်နှာပြင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ဤ filter ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်မှာ FM band ၏အထက်နှင့်အောက်တွင်ပိုမိုမတ်စောက်သော rolloff များရှိသည်။ ဤသည်အခြားကြိမ်နှုန်းမှာ sideband ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ အားနည်းချက်သည်စစ်ထုတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
လက်တွေ့တွင် filter သည် 39pF capacitor ကိုအစားထိုး။ filter ၏ဗဟို earth terminal သည် PC board earth နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ဒါကြောင့် 39pF capacitor တွေကြားကအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်။ ၃၉pF နှင့် ၃.၃ PF capacitors နှင့် 39nH နှင့် 3.3nH inductors များကိုမလိုအပ်ပါ။ 68nH inductors ကို wire link နှင့်အစားထိုးသည်။
Fig.5 (က) ဤပုံသည်ကွန်ပျူတာဘုတ်၏ကြေးနီဘက်တွင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းလေးခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ထားသည်ကိုပြသည်။ IC1 & VC1 ကိုမှန်ကန်စွာ ဦး တည်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။
Stereo FM Micromitter ၏ full circuit အတွက် Fig.4 ကိုယခုရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း IC1 သည် FM stereo transmitter ကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်အနည်းငယ်သောအခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် circuit ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဘယ်နှင့်ညာအသံ input အချက်ပြမှုများသည်1μF bipolar capacitors များမှတဆင့်ထည့်သွင်းပြီး10kΩ fixed resistors နှင့်10kΩ trimpots (VR1 & VR2) တို့ပါ ၀ င်သည့် attenuator ဆားကစ်များသို့ဆက်သွယ်သည်။ ထိုမှစ။ အချက်ပြမှုများ1μF electrolytic capacitors မှတဆင့် IC22 ၏တံသင် 1 & 1 သို့ချိတ်ဆက်နေကြသည်။
သတိပြုရမည်မှာ1μF bipolar capacitors များသည် DC current စီးဆင်းမှုကို signal source outputs မှ DC offsets များမှကာကွယ်ရန်ထည့်သွင်းထားသည်။ အလားတူစွာ၊ trimpots တွင် DC current ကိုကာကွယ်ရန် pins 1 & 1 ရှိ22μF capacitors လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာဤ input pin နှစ်ခုသည် supply တစ်ဝက်တွင်ဘက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤထက်ဝက်ထောက်ပံ့သောရထားလမ်းသည် IC10 ၏ pin4တွင်1μF capacitor ကို အသုံးပြု၍ သွယ်တန်းထားသည်။
2.2nF Pre-အလေးချိန် capacitors သည် pin2& 21 တွင်ရှိပြီး pinp 150 &3ရှိ 20pF capacitors သည် low-pass filter rolloff point ကိုသတ်မှတ်သည်။ pilot level ကို capacitor နဲ့ pin 19 မှာထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ capacitor မထည့်ဘဲနဲ့အတော်လေးသင့်တော်တဲ့အတွက်ဒါဟာမလိုပါဘူး။
တကယ်တော့ဒီမှာ capacitor ကိုထည့်လိုက်ရင် pilot ton phase 38kHz multiplexing rate နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် stereo ခွဲထုတ်မှုကိုသာလျော့နည်းစေသည်။
7.6MHz လှို့ကို pin နှင့် 7.6 နှင့် 13 ကြားရှိ 14MHz crystal ကို ဆက်သွယ်၍ ဖွဲ့စည်းသည်။ လက်တွေ့တွင်ဤ crystal သည် internal inverter stage နှင့်အပြိုင်ဆက်သွယ်သည်။ 27pF capacitors မှန်ကန်သောဝန်ကိုပေးနေစဉ်ကြည်လင်ခြင်း, တုန်ခါမှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုသတ်မှတ်။
ပုံ ၅ (ခ) - အစိတ်အပိုင်းများကို PC board ၏ထိပ်တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း - plugpack-powered version ကိုတည်ဆောက်ရန်။ သတိပြုရမည်မှာ IC5, VC1 နှင့် 1nH & 68nH inductors များသည်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသောကိရိယာများဖြစ်ပြီး Fig.680 (က) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဘုတ်၏ကြေးနီဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
programmable divider (သို့မဟုတ် program counter) ကို pins 15, 16, 17 & 18 (D0-D3) တွင်ခလုတ်များ သုံး၍ သတ်မှတ်သည်။ ဤသွင်းအားစုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်10kΩ resistors များမှမြင့်မားစွာထိန်းချုပ်ထားပြီးခလုတ်များပိတ်သောအခါနိမ့်ကျသွားသည်။ ဇယား ၁ တွင်မတူညီသောဂီယာကြိမ်နှုန်း ၁၄ ခုမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ပုံကိုပြသည်။
RF oscillator output သည် pin9တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Colpitts oscillator ဖြစ်ပြီး induction L1, 33pF & 22pF fixed capacitors နှင့် varicap diode VC1 ကို အသုံးပြု၍ ညှိသည်။
33pF ပုံသေ capacitor သည်လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ DC1 သည် VC1 တွင်အသုံးပြုသော DC voltage ကို L1 သို့စီးဆင်းခြင်းကိုတားဆီးစေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ VC9 နှင့် တွဲဖက်၍ ဖြစ်သောကြောင့် pin XNUMX မှ“ မြင်ရ” သည့်အတိုင်း varicap capacitance ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
၎င်းသည် varicap control voltage ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် RF oscillator ၏ frequency frequency ကိုလျော့နည်းစေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သော phase lock loop loop ကိုထိန်းချုပ်သည်။
အလားတူစွာ 10pF capacitor သည် DC current L1 သို့ pin9မှတားဆီးသည်။ ၎င်း၏နိမ့်ကျသောတန်ဖိုးသည်ညှိထားသော circuit သည်ထိစပ်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ညှိထားသော circuit အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသော Q factor နှင့် oscillator ကိုစတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပုံ ၆ - ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွက်ဘုတ်ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။ ၎င်းသည် D6, ZD1 & REG1 ကိုစွန့ ်၍ ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုနှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိစ္စသာဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ် output output အချက်ပြ pin ကို5မှာပုံပေါ်နှင့် VR10 trimpot မှ3Î¼F capacitor ကနေတဆင့်အစာကျွေးသည်။ ဤသည် trimpot သည့်မော်ဂျူအတိမ်အနက်ကိုသတ်မှတ်။ ထို မှနေ၍ attenuated signal သည်10Î¼F capacitor နှင့်10kÎ resistors နှစ်ခုမှတစ်ဆင့် varicap diode VC1 သို့ပို့သည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း pin7ရှိ phase lock loop control (PLL) output ကို carrier carrier frequency ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီ output က high-gain Darlington transistor Q1 ကိုမောင်းနှင်ပြီးဒီက1kÎ series series resistors နှစ်ခုနဲ့3.3kÎ isolating resistor တွေကနေ VC10 ကို control voltage ကိုသက်ရောက်စေတယ်။
၃.၃kÎ © resistors နှစ်ခု၏လမ်းဆုံရှိ 2.2nF capacitor သည်ကြိမ်နှုန်းမြင့်စစ်ထုတ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
အပိုဆောင်း filtering ကို100Î¼F capacitor နှင့်Q100âs s အခြေစိုက်စခန်းနှင့်စုဆောင်းအကြားစီးရီးချိတ်ဆက်1ÎF resistor အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ 100Î© resistor သည် transistor အားယာယီအပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ 100 capacF capacitor သည်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းစစ်ထုတ်မှုကိုပေးသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်စစ်ထုတ်မှုကို Q47 ၏အခြေစိုက်စခန်းနှင့်စုဆောင်းသူများအကြားတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော 1nF capacitor ကထောက်ပံ့ပေးသည်။
5.1V မီးရထားနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော5kÎ resistor သည်စုဆောင်းသူဝန်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ transistor ကိုပိတ်ထားသည့်အခါဤ resistor သည် Q1 ၏စုဆောင်းမှုကိုမြင့်စေသည်။
အဆိုပါ modulated RF output ကို pin ကို 11 မှာပေါ်လာသည်နှင့် passive LC bandpass filter ကိုကျွေးမွေးသည်။ ၎င်း၏အလုပ်မှာမော်ဂျူးနှင့် RF လှိုအထွက်တွင်ထုတ်လုပ်သောမည်သည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် filter သည် 88-108MHz band တွင်ကြိမ်နှုန်းကိုဖြတ်သန်းသွားသော်လည်း၊ အထက်နှင့်အောက်ရှိ signal ကြိမ်နှုန်းကိုဖယ်ရှားသည်။
၎င်း filter ၏ nominal impedance သည် 75 °ရှိပြီး၎င်းသည် IC1 ၏ pin 11 output နှင့်အောက်ပါ attenuator circuit နှစ်ခုလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၃၉Î စီးရီး resistors နှစ်ခုနှင့် 39W shunt resistor တို့သည် Atenuator ကိုဖွဲ့စည်းပြီးယင်းက signal အင်တာနာသို့အင်တာနာကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဒီ attenuator သည် transmitter ကို 56 allowW ၏တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောန့်သတ်ချက်အတိုင်းလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Fig.7: ဤပုံသည်ကွိုင် L1 အတွက်အကွေ့အကောက်များသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသည်။ ယခင်ကို 13mm ထက်မပိုသောဘုတ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လိုအပ်လျှင်ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်ကိုအသုံးပြုပါ။
circuit အတွက်ပါဝါကို 9-16V DC plugpack သို့မဟုတ် 6V battery မှရရှိသည်။
plugpack supply တွင် power polar သည် on-off switch S5 နှင့် diolar D1 မှတစ်ဆင့် reverse polarity protection ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ZD1 သည် circuit အား high-voltage transients များမှကာကွယ်ပေးသည်။ regulator REG1 သည် circuit အား power လုပ်ရန်တည်ငြိမ်သော + 5V rail ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုအတွက် ZD1, D1 နှင့် REG1 ကိုမသုံးပါ။ D1 နှင့် REG1 အတွက်ဖြတ်သွားသောဆက်သွယ်မှုများကိုတိုသည်။ IC1 အတွက်အမြင့်ဆုံး supply သည် 7V ဖြစ်ပြီး 6V ဘက်ထရီသည်သင့်တော်သည်။ ဥပမာ -4x AAA ရှိသည့် 4A AAA ဆဲလ်များ။
တစ်ခုတည်းသော PC board တစ်ခုသည် 06112021 အမှတ်အသားပြုထားပြီး ၇၈ x ၅၀ မီလီမီတာသာရှိသည်။ ၎င်းသည် Micromitter အတွက်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသိမ်းထားသည်။ ၎င်းကို ၈၃ x ၅၄ x ၃၀ မီလီမီတာရှိသောပလတ်စတစ်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသည်။
ပထမ ဦး စွာ PC board သည်ကိစ္စနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ထောင့်တိုင်များပေါ်တွင်ထိုင်ရန်ထောင့်များကိုပုံဖော်ရန်လိုကောင်းလိုပေမည်။ ပြီးပြီဆိုလျှင် DC socket နှင့် RCA socket pins တို့၏အပေါက်များသည်မှန်ကန်သောအရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ L1 တွင်ယခင်၌အောက်ခြေရှိမရှိ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ၎င်းကိုလုံလောက်စွာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သောတွင်းထဲသို့တွန်းခြင်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒီအပေါက်မှန်ကန်သောအချင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
Fig.5 (a) & Fig.5 (ခ) အစိတ်အပိုင်းများကို PC board ပေါ်တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသည်ကိုပြသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်မှာ PC board ၏ copper side တွင်မျက်နှာပြင်တပ်ရန်အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းများတွင် IC1, VC1 နှင့် inductors နှစ်ခုပါဝင်သည်။
ဤအလုပ်အတွက်သင့်အားကောင်းမွန်သော tering ဂဟေဆော်ရန်၊ ကြိုးများ၊ အားကြီးသောအလင်းနှင့်မှန်ဘီလူးလိုအပ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, ဂဟေသံအစွန်အဖျားကိုကျဉ်းသောဝက်အူလှည့်ပုံသဏ္toာန်အားဖြည့်ခြင်းဖြင့်ပြုပြင်ရမည်။
ကျန်ရှိနေသေးသောအစိတ်အပိုင်းများကို PC board ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ IC အပါအဝင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းလေးမျိုးကိုပထမ ဦး ဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံ၏ကိုယ်ထည်သည်ကပ်လျက်10kÎ resistors (ဘယ်ဘက်ပုံ) ကို ဖြတ်၍ မည်သို့တည်ရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။
IC1 နှင့် varicap diode (VC1) များသည် polarized devices များဖြစ်သဖြင့် overlay တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းတို့ကို orientation လုပ်ထားပါ။ အပိုင်းတစ်ခုစီကို၎င်းကိုညှပ်များနှင့်နေရာတွင်ထားပြီးထို့နောက်ခဲတစ်လုံး (သို့မဟုတ် pin) ကို ဦး စွာရောင်းချခြင်းဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကျန်ရှိသောခဲများကိုဂရုတစိုက်မရောင်းချမီအစိတ်အပိုင်းကိုမှန်ကန်စွာနေရာချထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
IC ကိစ္စတွင် PC pin များထဲသို့မထည့်မီ၎င်း၏တံသင်တစ်ခုစီ၏အောက်ဘက်ကို ဦး စွာပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ခဲတစ်လုံးချင်းစီကိုဂဟေသံတိုင်များတပ်ဆင်ပြီးယင်းကိုတပ်ဆင်ရန်အပူပေးရပါမည်။
ဤအလုပ်အတွက်အားကြီးသောအလင်းနှင့်မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရုံသာမကချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက်လည်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုသည်။ အထူးသဖြင့်, ကပ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ် IC တံသင်အကြားအဘယ်သူမျှမတိုတောင်းသောရှိပါတယ်သေချာပါစေ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ multimeter ကို သုံး၍ pin တစ်ခုချင်းစီသည် PC board ရှိသက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနှင့်အမှန်ပင်ချိတ်ဆက်နေကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ကျန်ရှိနေသေးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့် PC board ၏အပေါ်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ Plpack-powered version ကိုသင်တည်ဆောက်နေပါက Fig.5 တွင်ဖော်ပြထားသော overlay diagram ကိုလိုက်နာပါ။ တနည်းအားဖြင့် battery power powered version အတွက်မူ ZD1 နှင့် DC socket ကိုစွန့်ခွာ။ Fig.1 တွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း D1 & REG6 ကို wire link များဖြင့်အစားထိုးပါ။
အပေါ်ဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းကို resistors နှင့် wire link များတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ဇယား ၃ တွင် resistor အရောင်ကုဒ်များကိုဖော်ပြထားသော်လည်းတန်ဖိုးများကိုစစ်ဆေးရန်ဒီဂျစ်တယ် multimeter ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ resistors အများစုသည် end ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးနေရာချွေတာရန်ဖြစ်သည်။
resistors များ ၀ င်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် antenna output နှင့် TP GND နှင့် TP1 test point များ၌ PC လောင်းကြေးများတပ်ဆင်ပါ။ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဤအချက်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် trimpots VR1-VR3 နှင့် PC-mount RCA socket များတပ်ဆင်ပါ။ ထို့နောက် DC socket, diode D1 နှင့် ZD1 တို့သည် plugpack-powered version အတွက်ထည့်နိုင်သည်။
capacitors သည်လာမည့်တွင်သွားနိုင်သည်။ electrolytic type များကိုမှန်ကန်သော polarity နှင့်တပ်ဆင်ရန်ဂရုစိုက်မည်။ NP (non-polarized) သို့မဟုတ် bipolar (BP) electrolytic အမျိုးအစားများကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုတပ်ဆင်သောအပေါက်များထဲသို့ဖြည်းညှင်းစွာထည့်ပါ၊ သို့နှင့်၎င်းတို့သည် PC board အထက် ၁၃ မီလီမီတာထက်မပိုသောထိုင်ခုံများ (AAA ဘက်ထရီများကိုသေတ္တာအတွင်းရှိ PC ဘုတ်အောက်တွင်တပ်ဆင်သောအခါအဖုံးကိုမှန်ကန်စွာကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်) ။
ကြွေပြား capacitors ကိုလည်းဒီအဆင့်မှာတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဇယား ၂ သည်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များကိုလွယ်ကူစွာဖော်ပြရန်သူတို့၏အမှတ်အသားကုဒ်များကိုပြသည်။
Fig.7 သည်ကွိုင် L1 အတွက်အကွေ့အကောက်များသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသထားသည်။ ၎င်းတွင် F2.5 ferrite ပက်ကျိတပ်ဆင်ထားသည့်ဘုံကွိုင်ပေါ်သို့ ၀.၅ မှ ၁ မီလီမီတာရှိသောကြွေဝါယာကြိုး (ECW) ၏ ၂.၅ အလှည့်ပါ ၀ င်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်စီးပွားဖြစ်လုပ်သော ၂.၅ လှည့် variable ကွိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Former အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရရှိနိုင်ပါသည် - တစ်ခုမှာ 2-pin base (PC board သို့တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်ပြီး) နှင့် base မပါဘဲလာနိုင်သည်။ အကယ်၍ ယခင်၌အခြေခံရှိပါက၎င်းကို (အမြင့်အပါအ ၀ င်) အမြင့်မှာ ၁၃ မီလီမီတာဖြစ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံး ၂ မီလီမီတာအတိုချုပ်ရမည်။ ၎င်းကိုသွားတို့ကိုလှီးပြီးသုံးနိုင်သည်။
ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကွိုင်ကိုအကုန်ဖြတ်ပစ်ပါ။ pin တွေပေါ်စွန်းကိုတိုက်ရိုက်အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးကွိုင်ကိုအနေအထားရောက်အောင်ပြန်ထားပါ။ သတိပြုရမည်မှာအလှည့်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကပ်လျက်တည်ရှိသည် (ဥပမာ၊ ကွိုင်သည်အနီးကပ်အနာဖြစ်သည်) ။
ဤပုံတွင် RCA socket များ၊ power socket နှင့် antenna lead ကိုယူရန်အမှုမည်သို့တူးသည်ကိုပြသည်။
တနည်းအားဖြင့် အကယ်၍ ယခင်၌အခြေအမြစ်မရှိပါကကော်လာကိုတစ်ဖက်တွင်ဖြတ်တောက်ပါ၊ ထို့နောက် PC ဘုတ်တွင် L1 အနေအထားရှိအပေါက်တစ်ခုအားတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်အောင်တူးပါ။ ပြီးသွားပြီဆိုလျှင်အဟောင်းကို၎င်း၏အပေါက်ထဲသို့တွန်းတင်ပါ၊ ထို့နောက်ကွိုင်ကိုလေတိုက်လိုက်လျှင်အနိမ့်ဆုံးအကွေ့အကောက်အကွာအဝေးဘုတ်၏ထိပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ပါလိမ့်မည်။
PC board သို့သွယ်တန်းထားခြင်းမပြုမီဝါယာကြိုးအဆုံးများမှ insulator ကိုဖယ်ရှားရန်သေချာပါစေ။ ထို့နောက်ဆီလီကွန်တံစို့၏ dabs အနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ferrite ပက်ကျိကိုအရင်ထဲသို့ထည့်ပြီးအပေါ်ဘက်သည်ထိပ်၏ထိပ်နှင့်အတူစီးဆင်းသွားစေရန်အတွက်ဝက်အူထည့်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သောပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ကြေးဝါကိုချိန်ကိုက်ကိရိယာကို သုံး၍ ပက်ကျိတွင်ဝက်အူထည့်ရန်အသုံးပြုပါ။
Crystal X1 ကိုယခုတပ်ဆင်နိုင်ပါပြီ။ ၎င်းကို၎င်း၏ ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုကို ၉၀ ဒီဂရီဖြင့်ကွေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်90kÎ resistors နှစ်ခုကြားတွင်အလျားလိုက်နေရာချနိုင်သည် (ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပါ) ။ ယခုဘုတ်အဖွဲ့အစည်းကို DIP switch, transistor Q10, regulator (REG1) နှင့်အင်တင်နာခဲတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပြီးစီးနိုင်သည်။
အင်တင်နာသည်လှိုင်းတံပိုးတစ်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ၁.၅ မီတာရှည်သော insulator တွင်ရှိသောချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုးများပါ ၀ င်ပြီး၊ ၎င်းသည် transmission range range နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များပေးသင့်သည်။
ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည် RCA socket များထားရှိရန်တစ်ဖက်တွင်အပေါက်များလိုအပ်ပြီး၊ အခြား antenna lead နှင့် DC power socket (အသုံးပြုပါက) အတွက်အခြားအဆုံးရှိအပေါက်များလိုအပ်သည်။
ထို့အပြင် power switch အတွက်အဖုံးတစ်ပေါက်ကိုတူးရမည်။
အကယ်၍ သင် unit ကို portable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်4x 1.5V AAA ဆဲလ်များမှ circuit ကို power လုပ်နိုင်တယ်။ သတိပြုရမည်မှာဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်အမှုအတွင်းရှိအရာအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီရန်အတွက်ပြုပြင်ရန်အချို့လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။
PC board နှင့်ကိုက်ညီရန်အဖုံး၏နံရံတစ်လျှောက်ရှိအတွင်းဘက်ခြမ်းမှိုများကို ၁၅mm မီလီမီတာအနက်အနက်သို့ဖယ်ထုတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ထိုအရာများကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စူးရှသောစကတ်ကိုသုံးခဲ့သော်လည်းကြိတ်ခွဲစက်သေးသေးလေးကိုသုံးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ပြီးနောက် RCA နှင့် DC socket များ၏ထိပ်များကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်အဖုံးနံရံများကိုလည်းဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်ရှေ့မျက်နှာပြင်တံဆိပ်ကိုအဖုံးနှင့်ကပ်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီစွမ်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောဗားရှင်းသည် AAA ဆဲလ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ် ဦး ရှိပြီးသေတ္တာထဲတွင်ဇောက်ထိုးတပ်ဆင်ထားပြီးကိုင်သူ၏အောက်ခြေသည် PC ဘုတ်၏ကြေးနီဘက်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ဒီကိုင်ဆောင်သူနှင့် PC ဘုတ်အတွက်အိတ်ထဲတွင်အောက်ပါအချက်များနှင့်အတူလုံလုံလောက်လောက်နေရာချထားနိုင်သည်။
(၁) ။ ပါဝါခလုတ် S1 မှအပကျန်အစိတ်အပိုင်းများသည် PC board ၏မျက်နှာပြင်အထက်တွင် 5mm ထက်မပိုရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ electrolytic capacitors သည် PC board နှင့် ကပ်၍ L13 ၏ယခင်အရှည်ကိုမှန်ကန်စွာဖြတ်တောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
(၂) ။ AAA ဆဲလ်ကိုင်ဆောင်သူသည် ၁ မီလီမီတာခန့်အထူရှိပြီးအဆုံးတစ်ခုစီတွင်ချထားသင့်သည်။ သို့မှသာဆဲလ်များကကိုင်ဆောင်သူ၏ထိပ်တွင်အနည်းငယ်ပေါ်လာသည်။
(၃) RCA socket များ၏ထိပ်များ၌အနည်းငယ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာဘောင်နှင့်အဖုံးအကြားကွာဟမှုမရှိတော့ပါ။
သြစတြေးလျဆက်သွယ်ရေးအာဏာပိုင်မှထုတ်ပြန်သော FM ရေဒီယိုလှိုင်းဒီယိုစတီရီယိုထုတ်လွှင့်စက်သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှုနည်းသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအလားအလာရှိသောစက်ပစ္စည်းလိုင်စင်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
အထူးသဖြင့်ထုတ်လွှင့်မှု၏ကြိမ်နှုန်းသည် ၈၈-၁၀၈ MHz band အတွင်းရှိ EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) 88mW ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး FM modulation သည် 108kHz bandwidth ထက်မပိုရမည်။ လိုင်စင်areaရိယာအတွင်းလည်ပတ်နေသည့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သူသို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ဘူတာ) နှင့်တူညီသောကြိမ်နှုန်းအတိုင်းမပြုလုပ်ရ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် www.aca.gov.au web site ကို။
LIPD များအတွက်အတန်းအစားလိုင်စင်အချက်အလက်ကို -
စမ်းသပ် & ညှိနှိုင်းမှု
ဒီအပိုင်းကတကယ့်ရေစာပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်မှာ L1 ကိုညှိရန်ဖြစ်ပြီး RF လှိုသည်မှန်သောအကွာအဝေးတွင်လည်ပတ်စေသည်။ ထိုသို့ပြုရန်အောက်ပါအဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါ။
(၁) ။ ဇယား ၁ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း DIP ခလုတ်များ အသုံးပြု၍ ဂီယာကြိမ်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ပါ။ သင့်ဒေသရှိစီးပွားဖြစ်ဘူတာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးမပြုရသေးသောကြိမ်နှုန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သို့မဟုတ်ပါကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်ပြbeနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
(၂) ။ သင်၏ multimeter ၏ဘုံ ဦး ဆောင်လမ်းပြကို TP GND နှင့် IC2 ၏ ၈ အမှတ်သို့အပြုသဘောဆောင်သောဆက်သွယ်မှုကိုချိတ်ဆက်ပါ။ မီတာပေါ်တွင် DC volts အကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ၊ Micromitter ကိုအသုံးပြုပါ။ သင် DC plugpack ကိုအသုံးပြုပါက 8V နှင့်နီးကပ်သောစာဖတ်ခြင်းရရှိသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့်သင် AAA ဆဲလ်များကိုအသုံးပြုနေပါကမီတာသည်ဘက်ထရီဗို့အားပြသင့်သည်
(၃) ကောင်းမွန်သော multimeter ခဲများကို TP3 သို့ရွှေ့။ LV ရှိပက်ကျိကို 1V ခန့်ဖတ်ပါ။
ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် PC board ၏အောက်ဘက်ရှိအောက်ခြေတွင်ထိုင်သည်။
အဆိုပါလှိုယခုမှန်ကန်စွာညှိနေသည်။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသောတီးဝိုင်းအတွင်းရှိအခြားကြိမ်နှုန်းသို့ပြောင်းပါက L1 သို့နောက်ထပ်ချိန်ညှိမှုများမလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အခြားတီးဝိုင်းတွင်ရှိသောကြိမ်နှုန်းသို့ပြောင်းလဲပါက LP TP1 တွင် 2V ဖတ်ရန်အတွက် L1 ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိရမည်။
အဆိုပါ trimpots ချိန်ညှိခြင်း
ပုံ ၈ - ရှေ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအပြည့်အစုံ။
ယခုကျန်ရှိနေသည့်အရာအားလုံးမှာ signal level နှင့် modulation depth ကိုသတ်မှတ်ရန် trimpots VR1-VR3 ကိုညှိရန်ဖြစ်သည်။ အဆင့်တစ်ဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ် -
(၁) ။ VR1, VR1 & VR2 ကိုသူတို့၏ဗဟိုနေရာများတွင်ထားပါ။ VR3 နှင့် VR1 ကို RCA μ socket များအလယ်ဗဟိုမှတစ်ဆင့်ဝက်အူလှည့်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
(၂) ။ stereo FM tuner (သို့) ရေဒီယိုကို transmitter frequency သို့ညှိပါ။ FM tuner နှင့် transmitter ကိုနှစ်မီတာအကွာအဝေးတွင်ထားသင့်သည်။
(၃) စတီရီယိုအချက်ပြအရင်းအမြစ် (ဥပမာ - CD player) တစ်ခုကို RCA socket input များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းကို tuner သို့မဟုတ် radio မှလက်ခံကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
ပုံ ၉ - PC board အတွက်အရွယ်အစားပြည့်ပုံသဏ္patternာန်ပုံ။
(၄) ။ စတီရီယိုညွှန်ပြချက်သည်လက်ခံသူအပေါ်သို့မရောက်မချင်း VR4 ကိုလက်ယာရစ်ဖြင့်ချိန်ညှိပါ၊ ထို့နောက် VR3 ကိုနာရီမှ 3/1 အလှည့်ဖြင့်ဒီအနေအထားမှလက်ယာရစ်ချိန်ညှိပါ။
(၅) tuner မှအကောင်းဆုံးအသံအတွက် VR5 နှင့် VR1 ကိုချိန်ညှိပါ။ ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုစီပြုလုပ်ရန်အချက်ပြအရင်းအမြစ်ကိုခေတ္တဖြတ်တောက်ရပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်နောက်ခံဆူညံသံကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လုံလောက်သောအချက်ပြမှုရှိသင့်သော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်ပုံပျက်မှုမရှိပဲထားသင့်သည်။
သတိပြုရမည်မှာ VR1 နှင့် VR2 သည်ဘယ်နှင့်ညာချန်နယ်ချိန်ကိုက်မှုတစ်ခုစီကိုတူညီသောအနေအထားတွင်ထားရမည်။
သင်၏ Stereo FM Micromitter အသစ်သည်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
စားပွဲတင် 2: Capacitor ကုဒ်များ
အဘိုး IEC Code ကို EIA Code ကို
စားပွဲတင် 3: ခံနိုင်ရည်အရောင်ကုဒ်များ
နံပါတျ အဘိုး 4- Band Code (1%) 5- Band Code (1%)
1 ၂၂ ကီလိုဂရမ် အနီရောင်အနီလိမ္မော်ရောင်အညို အနီရောင်အနီအနက်ရောင်အနီအညိုရောင်
8 ၂၂ ကီလိုဂရမ် အညိုရောင်အနက်ရောင်လိမ္မော်ရောင်အညို အညိုအနက်ရောင်အနက်ရောင်အနီရောင်အညိုရောင်
1 ၂၂ ကီလိုဂရမ် အစိမ်းညိုအနီရောင်အညိုရောင် အစိမ်းရောင်အညိုအနက်ရောင်အညိုရောင်အညို
2 ၂၂ ကီလိုဂရမ် လိမ္မော်ရောင်လိမ္မော်ရောင်အနီအညိုရောင် လိမ္မော်ရောင်လိမ္မော်ရောင်အနက်ရောင်အညိုရောင်အညိုရောင်
1 100Ω အညိုရောင်အနက်ရောင်အညိုရောင်အညို အညိုရောင်အနက်ရောင်အနက်ရောင်အညိုရောင်
1 56Ω အစိမ်းအပြာအနက်ရောင်အညိုရောင် အစိမ်းအပြာအနက်ရောင်ရွှေအညို
2 39Ω လိမ္မော်ရောင်အဖြူအနက်ရောင်အညိုရောင် လိမ္မော်ရောင်အဖြူအနက်ရောင်ရွှေအညို
1 PC ဘုတ်အဖွဲ့, ကုဒ် 06112021, 78 x ကို 50mm ။
1 ပလပ်စတစ် utility box, 83 x 54 x 31mm
1 ရှေ့ panel ကိုတံဆိပ်, 79 x ကို 49mm
1 7.6MHz သို့မဟုတ် 7.68MHz ကြည်လင်
1 SPDT subminiature switch (Jaycar ST-0300, Altronics S 1415 or equiv ။ ) (S5)
PC-mount RCA socket ၂ ခု (အလှည့်) (Altronics P 2, Jaycar PS 0209)
1 2.5mm PC-mount DC ပါဝါအပေါက်
1 4- လမ်း DIP switch ကို
၁.၅ ပြောင်းလဲနိုင်သောကွိုင် (L1) ကိုလှည့်သည်။
1 4mm F29 ferrite ပက်ကျိ
1 680nH (0.68μH) မျက်နှာပြင်ကိုတပ်ဆင်ထားသော inductor (1210A case) (Farnell 608-282 သို့မဟုတ်အလားတူ)
1 68nH မျက်နှာပြင်ကို inductors (0603 အမှု) (Farnell 323-7886 သို့မဟုတ်အလားတူ) mount ရှိသည်။
1mm ကြွေကြေးနီဝါယာကြိုး၏ 100 1mm အရှည်
1mm Tinned ကြေးဝါယာကြိုး၏ 50 0.8mm အရှည်
hookup ဝါယာကြိုး 1 1.6m အရှည်
3 PC လောင်းကြေး
14x AAA ဆဲလ်ကိုင်ဆောင်သူ (ဘက်ထရီအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်)
AAA ဆဲလ် ၄ ခု (ဘက်ထရီအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်)
3 10kΩဒေါင်လိုက် trimpots (VR1-VR3)
1 BH1417F Rohm မျက်နှာပြင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသော FM စတီရီယို transmitter (IC1)
1 78L05 စွမ်းအင်နည်းသောစည်းမျဉ်း (REG1)
1 ZMV833ATA သို့မဟုတ် MV2109 (VC1)
2 100μF 16VW PC ကို electrolytic
5 10μF 25VW PC ကို electrolytic
2 1μFစိတ်ကြွ Electrolytic
2 10nF (.01μF) ကြွေထည်
1 330pF ကြွေ
2 150pF ကြွေ
1 39pF ကြွေ
1 33pF ကြွေ
2 27pF ကြွေ
1 22pF ကြွေ
1 10pF ကြွေ
1 3.3pF ကြွေ
ဂီယာကြိမ်နှုန်း 87.7MHz ခြေလှမ်းများအတွက် 88.9MHz မှ 0.2MHz မှ
၁၀.၂ MHz မှ ၁၀၇.၉ MHz မှ ၁၀၇.၇MHz မှ (စုစုပေါင်း ၁၄ ခု)
စုစုပေါင်း Harmonic Distortion (THD) ပုံမှန်အားဖြင့် 0.1%
Pre- အလေးပေး ပုံမှန်အားဖြင့် 50ms
အနိမ့် Pass ကို filter 15kHz / 20dB / ဆယ်စုနှစ်
ရုပ်သံလိုင်းခွဲခြားခြင်း ပုံမှန်အားဖြင့် 40dB
ရုပ်သံလိုင်းချိန်ခွင်လျှာ ? 2dB အတွင်း (trimpots နှင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်)
RF Output ပါဝါ (EIRP) တပ်ဆင်ထားသည့် attenuator ကိုအသုံးပြုသောအခါပုံမှန်အားဖြင့်10μW
ထောက်ပံ့ရေးလက်ရှိ 28V မှာ 5mA
အသံထည့်သွင်းမှုအဆင့် 220Hz အမြန်နှုန်း 400HzVV နှင့် 1dB ချုံ့မှုကန့်သတ်ချက်
သင်သည်ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုဤနေရာတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ST0300: Sub-Mini TOGGLE SPDT SOLDER TAG ချည်နှောင်ထားသည်
ဤဆောင်းပါးအတွက်အောက်ပါ downloads များကိုရရှိနိုင်သည်။
Micromitter ရှေ့မျက်နှာပြင် (PDF)
Micromitter ရှေ့မျက်နှာပြင် (ZIP)